Dowladda Itoobiya ayaa xaqiijisay in Farmaajo uu ka tanaasulay dacwadii kala dhaxaysay dowladda Kenya ee ku saabsaneed dhanka Badda.
Telefeshinka rasmiga ah ee dowladda Itoobiya ayaa baahiyay in Abiy Axmed uu ku guuleystay in Uhuru Kenyaatta iyo Farmaajo ku heshiiyeen in khilaafkii dhanka Badda lagu dhameeyay wadahadal oo aan lagu dhammeyn dhanka waxa loogu yeero Maxkamadda caalamiga ah.
"Labada madaxweyne ee Soomaaliya Maxamed Cabdulahi Farmaajo iyo Kenya Uhuru Kenyatta kulan fool ka fool ah ay yeesheen oo uu garwadeen ka ahaa Ra’iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo ah guddoomiyaha urur goboleedka IGAD waxa ay isla oggolaadeen in lagu xaliyo si diblumaasi ah khilaafka u dhexeeya ee salka ku haya lahaanshaha dhul badeed" ayaa lagu yiri warka uu faafiyay Telefeshinka.
Go'aankan cusub ee Nairobi lagu gaaray ayaa guul weyn u ah dowladda Kenya oo xusul duub weyn ugu jirtay in dacwadda dhanka Badda ee kala dhaxaysa Dowladda Federaalka Soomaaliya lagasoo wareejiyo dhanka Maxkamadda ICJ khilaafkana lagu dhammeeyo wadahadal siyaasadeed.
Bishii lasoo dhaafay ayay dowladda Kenya ku dhawaaqday in ay jartay wixii xiriir ahaa ee kala dhaxeeyay dowladda Federaalka waxayna falanqeeyayaashu tallaabada Farmaajo ku tagay Kenya ay aheyd khalad siyaasadeed mar haddii Kenya soo cayrisay safiirkii DF-ka uqaabilsanaa dalkeeda islamarkaana safiirkeedi Muqdisho ka qaadatay.
R/wasaaraha Xabashida Itoobiya oo isku arka in uu yahay Ninka ugu awoodda badan bariga qaaradda Afrika ayaa doonaya in uu hoggaanka dowladda Federaalka ku qasbo aqbalidda rabitaanka Kenya.